Allgedo.com » Ra’iisul wasaare ku xigeenka wadanka Turkiga oo maanta Muqdisho Soo gaaray.
Home » News » Ra’iisul wasaare ku xigeenka wadanka Turkiga oo maanta Muqdisho Soo gaaray. Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimada wadanka Soomaaliya soo gaaray ra’iisul wasaare ku xigeenka wadanka Turkiga Bekir Bosdag waxaana la socday mas’uuliyiin aad u badan.
Saxaafadda mar uu la hadlay ra’iisul wasaare ku xigeenka Turkiga ayaawaxa uu sheegay in Soomaaliya dhawaan ay ka sameen doonaan mashruucyo aad u badan si tartiib tartiib ahna ay u bilaabi doonaan qorshooyinka ay dalka ku mnaal gishanaayaan.
Intaa ka dib wafdigaan waxay kulan la qaateen mas’uuliyiin aad u badan oo u ugu horeeyo ra’iisul wasaare C/weli Maxamed Cali Gaas oo wax kasoo dhaweeyay wafdigaan.